Wariye Maxamed Bili Bili Oo Xabsi Sharci Dharo Ah Ku Jira in ka Badan 14 saacadood | Lughaya.Com
Wariye Maxamed Bili Bili Oo Xabsi Sharci Dharo Ah Ku Jira in ka Badan 14 saacadood
Wariyaha caanka ah ee xaga ee tafaftirka iyo farsamada kamarada Engineer Maxamed Bili Bili ayaa xabsiga loo taxaabay iyada oo aan sifadii sharciga ahayd loo soo marin. Wariyahan ayaa waxa ay ciidanka bilayska gobolka Awdal ugu yeedheen xarunta bilayska saaka waxaana lagu wargaliyay in uu xadhig yahay. Kadib markii uu waydiiyayna sababta loo haysto waxa uu taliyaha qabtu u sheegay in uu amarka xadhigiisa soo bixiyay maayerka Borama.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in wariye maxamed Bili Bili uu daaha ka fayday musuqmaasuq iyo maamul xumo dulhoganaysa dawlada hoose taasi oo baryahan danbe baraha bulshada uu wariyuhu ku baahinayay maqaalo taxana ah oo la xidhiidha lunsiga hantida dawlada ee maayerka iyo maamulka kale ee gobolku ay ku tagrifalaan.
Nuxurka xadhigan ugu danbeeyay ee wariyaha ayaa lagu xidhiidhinayaa cadho hore oo maayarku uu u hayay wariyaha taasi oo ay sii shiday maqaalkii ugu danbeeyay ee wariye Bilibili uu kusoo baahiyay bartiisa Facebiiga kaasi oo ka xogwaramayay gaadhi uu leeyahay Badhasaabka Awdal oo sifo sharci daro ah ay isaga iyo maayerka Borama ay ku kala iibsadeen suuqa madaw iyaga oo ka faaiidaysanaya wakhtiga kala guurka.
Sikastaba ha ahaatee arintan ayaa salka ku haysa cabudhinta saxaafada madaxabanaan taasi oo dastuurku uu siiyay muwaadiniinta in ay xaq u leeyihiin in ay ilaaliyaan hantida dawlada ee la lunsanayo.